‘हेल्लो प्रहरी ! मेरो भाइले अपराध गर्‍यो’ « रिपोर्टर्स नेपाल
‘हेल्लो प्रहरी ! मेरो भाइले अपराध गर्‍यो’
प्रकाशित मिति : 2021 March 31, 10:10 am
स्याङ्जा, चैत १८ । एकै गाउँका तीन युवक एकै ट्र्याक्टरमा काम गर्थे। चैत ५ गते दिनभर खोलाकिनारमा ढुंगा, बालुवाको काम गरे। साँझ ट्र्याक्टरमा चालकलाई बीच पारी दायाँ–बायाँ दुई सहचालक बसे। उनीहरू ढुंगा, बालुवा भरिएको ट्र्याक्टर लिएर गल्याङ नगरपालिका–८ बग्रान्तीतर्फ लागे।
ट्र्याक्टर गुडिरहेकै बेला एक सहचालक १९ वर्षे गणेश गाहा भुइँमा खसेर घाइते भए। त्यसपछि चालकले ट्र्याक्टर फर्काए। घाइते अवस्थामा रहेका गाहालाई ट्र्याक्टरमै राखेर कालीगण्डकी नदीको साखरघाट पुर्‍याए। तब चालकले काँधमा हालेर लगे अनि नदीको बहावसँगै बगाइदिएको पाइएको प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीले बताए। त्यही घटनाका एक आरोपित व्यक्ति हुन्, सहचालक २१ वर्षे सुनील राना। उक्त घटना सुनाएपछि दिदीले नै उनलाई प्रहरीमा पुर्‍याएका थिइन्।
घटनापछि राना चालक २४ वर्षे अमित परियारको घरमा बसेका थिए। परियार भोलिपल्ट बिहानै बुटवलमा ससुरालीको घरतर्फ लागे। राना भने पाल्पास्थित दिदीको घरमा पुगे। त्यहाँ बस्दै गर्दा उनलाई उकुसमुकुस भयो। अन्ततः उनले दिदी देवी घिमिरेलाई घटनाको वास्तविकता सुनाए। उनले दिदीलाई भने, ‘मेरो सहायताले चालक अमित परियारले काँधमा बोकेर लगी अस्ति राति घाइते गणेशलाई कालीगण्डकी नदीमा फालिदिए।’
उनी घटना सुनेर झस्किइन्। गाहालाई भाइसरह सम्झिइन्। यस्तो घटना लुकाउन हँुदैन भन्ने ठानेर उनले प्रहरीको १०० नम्बरमा फोन गरेर जानकारी दिइन्। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
काठमाडौं, १९ असार । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । सभापति
रुस-युक्रेन युद्धको अन्तर्यमा पश्चिमा शक्ति र रुस लडे : प्रचण्ड
काठमाडौं, १९ असार : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रुस–युक्रेन युद्धको अन्तर्यमा
सुर्खेत कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी
काठमाडौँ,१९ असार । सुर्खेत जिल्ला कारगारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा समस्या भएको छ । पुरुष
किसानलाई ट्रयाक्टर हस्तान्तरण
काठमाडौँ,१९ असार । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकाका प्रमुख शान्तिरत्न शाक्य स्थानीय कृषकलाई पावर मिनी टिलर हस्तान्तरण
काठमाडौं, १९ असार । भिभो, ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रान्डले सबैभन्दा प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता फिफा विश्वकप
नेपालमा कोरोना बढ्दै, आज थप ५३ जनामा संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं, १९ असार । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको
१२ वर्षको उमेरमा विवाह, ४० वर्षमा ४४ सन्तान, घरको सबै पैसा लिएर पति भागे
एजेन्सी, १९ असार । अफ्रिकाको युगान्डाबाट डरलाग्दो खबर बाहिर आएको छ । यहाँ एक महिलाले
के फाउन्डेसन र चम्किलो मेकअपले लुक बिगार्छ
एजेन्सी, १९ असार । वर्षायामको चिसोले अनुहारको सौन्दर्य कमी ल्याउन सक्छ । मेकअप गरेपछि अनुहार